Ravalomanana Marc : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana ataon’ ny Mapar -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana Marc : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana ataon’ ny Mapar
27/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tonga saina, nifoha tamin’ ny torimasony ary niverina tao an-tsain’ity filoha teo aloha izay naongan’i Andry Rajoelina ity ny taona 2009, ka antony nanaovan’i Ravalomanana Marc fanambarana omaly tany Mahajanga fa tsy manaiky fanonganam-panjakana ny tenany raha nanotanian’ ny mpanao gazety “ Tsy miditra amin’ izany fanonganam-panjakana izany ny TIM, tsy hanonganam-panjakana ao. Izany no efa nahavoa ahy ve dia izao indray no hitarika amin’izany. Hetsiky ny depiote iny fa tsy midika fa ny antoko politika no miditra amin’ izany” hoy hatrany i Marc Ravalomanana omaly tany Mahajanga. Tsy nijanona tamin’ io tsy fanekena fanonganam-panjakana io anefa ny fanazavana izay nentin’ i Marc Ravalomanana , fa nialany ihany koa ireo solombavambahoaka izay manao ny hetsika” Hetsiky ny solombavambahoaka iny fa tsy misy hidiran’ ny TIM velively io hetsika izay tanterahin’ny solombavambahoaka io ” hoy hatrany i Marc Ravalomanana”. Ny andrasana noho izany ny fialan’ny solombavambahoaka TIM eny amin’ ny parvis Analakely, satria dia tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana izany ny filohan’antoko izay nirotsahan’ izy ireo hofidiana.
Mazava izany izao fa ireo solombavambahoaka izay mbola mijanona sy manohy ny asa fanakorontanana etsy amin’ ny parvis Analakely dia saika ireo solombavambahoaka voavidin’ i Andry Rajoelina vola. Mazava tsinona ny baikom-pitolomana avy amin’ i Marc Ravalomanana fa tsy ankasitrahiny ny endrika fanonganam-panjakana, izany hoe ny fitaritana vahoaka andalam-be. Noho izany ireo solombavambahoaka TIM, izay mbola tazana eny amin’ ny parvis Analakely dia azo tarafina fa mikarama, ka noho ny vola izay noraisina no mbola mampiziriziry azy ireo. Somary nahagaga ihany tokoa ny fihetsika izay nasehon’ ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa teny amin’ ny parvis Analakely , satria dia io no nahavoa ny filohan’ ny antokony dia i Ravalomanana izany nefa dia narahina ihany. Izao mazava ny lalao fa nizara ny TIM sy MAPAR ka mihanjahanja irery izany i Andry Rajoelina, izay efa tsy mahagaga ny fomba fanaony satria avy nanongana an’i Marc Ravalomanana, dia izao indray miroso mitady hanongana an’i Hery Rajaonarimampianina izay Filoham-pirenena ankehitriny.
Tsy misy izay tsy mimenomenona amin’ny fahavoretrana sy loto, ary fako ao amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka, na ny mponina ao an-toerana izany, na vahiny mandalo. Tena tsy hita intsony izay maha renivohitr’i Madagasikara ara-toekarena an’i Toamasina. ...Tohiny